Badhasaabka Gobolka Sanaag iyo Mayirka Ceerigaabo Maxay Ka Yidhaahdeen Xukunka Deg Deg Ah Ee lagu Soo Rogay?
May 1, 2019 - Written by mandheera news
Hargeysa(Mandheeranews):-Maayarka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa si kooban uga hadlay xaaladda degdegga ah ee madaxweynaha Somaliland ku soo rogay magaalooyinka Ceerigaabo, Ceelafweyn iyo Garadag waxaanu sheegay in uu arrintaasi saxaafadda ka maqlay haddana aanu wax tafaasiil ah ka bixinayn mawqifkiisa arrintan ku aaddan.
“Adeeraw sidaad xaaladdaa degdegga ah u maqashay uun baan aniguna uga maqlay warbaahinta waxa jawaab ahna hada ka bixin maayo,” sidaas ayuu maayar Ismaaciil Xaaji Nuur u sheegay suxufi Badri Koosaar oo ka tirsan telefishanka Eryal oo khadka telefoonka kula hadlay.
Badhasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbarow ayaa VOA-da u sheegay in ay hirgalinayaan xaaladda degdegga ah oo qayb ka ah dadaallada lagu sugayo ammaanka inta la soo qabanayo dablay hubaysan oo Salaasadii dilay laba sarkaal oo boolis ah.
Madaxweyne Biixi ayaa u muuqda in aanu hayn xal ka duwan bandowda uu galiyay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag waxaana arrintan ganafka ku dhuftay xisbiga WADDANI. Afhayeen Barkhad Jaamac Batuun ayaa baarlamaanka ugu baaqay in aanay kulankooda Khamiista ku ansixin xaaladdan degdegga ah.